Kuyini Okokuzithokozisa ku-Inthanethi? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Okokuzithokozisa ku-inthanethi kungamaseshini evidiyo anokuphendulana nokubukhoma okulinganiselwe emaqenjini amancane. Kwenza ufinyelele ababungazi abangochwepheshe, ukuxhumana ku-inthanethi kanye nendlela enhle kakhulu yokuxhumana nabantu emhlabeni jikelele.
Umehluko phakathi kokokuzithokozisa okukuhlanganisa nabantu nalokho okuku-inthanethi
Okokuzithokozisa ku-inthanethi kuqondiswa ku-Zoom. I-Zoom iyinkundla yasemoyeni yezingqungquthela zamavidiyo eyinkampani eseceleni futhi ungayisebenzisa kumakhompyutha edeskhithophu, amathebhulethi namadivayisi eselula.
Njengokuzithokozisa okukuhlanganisa nabantu, okokuzithokozisa ku-inthanethi kumelwe kuhlangabezane nezindinganiso zekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, okokuzithokozisa ku-inthanethi kumelwe futhi kuhlangabezane nezimfuneko ezengeziwe.
Izivakashi zinezinsuku ezingu-30 ukubhala isibukezo ngemva kokuphela kokokuzithokozisa. Zingashiyela umbungazi wazo umbiko wangasese kanye nombiko wasobala ukuze ubonwe yizivakashi zesikhathi esizayo. Funda kabanzi ngendlela ukubukeza okusebenza ngayo ngokokuzithokozisa okukuhlanganisa nabantu nalokho okuku-inthanethi.
Ungakhansela kuze kufike ezinsukwini ezingu-7 ngaphambi kwesikhathi sokuqalisa noma phakathi namahora angu-24 okubhukha, noma ushintshe ukubhukha kuze kufike emahoreni angu-72 ngaphambi kokuqala kokokuzithokozisa.Izinqubomgomo zezinguquko ekubhukheni okukhona ziyafana kukho kokubili Okokuzithokozisa okuku-inthanethi kwe-Airbnb nalokho okukuhlanganisa nabantu.
Okokuzithokozisa okuku-inthanethi kubekelwa inani lomuntu ngamunye ngokuzenzakalelayo. Izivakashi kufanele zibhukhe isikhala somuntu ngamunye ojoyina okokuzithokozisa. Kodwa-ke, uma umbungazi amukela ukuthi izivakashi eziningana zijoyine ngedivayisi ngayinye, uzokwazisa izivakashi ukuthi zidinga ukubhukha isikhala esisodwa ekhasini lazo lokokuzithokozisa ngaphansi kokuthi Lokho Ozokwenza nokuthi Indlela Yokubamba Iqhaza.
Ngokuphathelene nokokuzithokozisa okuku-inthanethi, izivakashi zifanelekela ukubuyiselwa imali ephelele uma kukhona noma yiziphi izinkinga zokusebenza kwezinto zobuchwepheshe, njengezinkinga zomsindo noma zevidiyo, ezenzeka ngenxa yamadivayisi azo noma idivayisi yombungazi. Ungafunda inqubomgomo egcwele yokubuyisela imali esihlokweni Senqubo Yokubuyisela Isivakashi Kokokuzithokozisa.
Uma udinga ukuthumela noma ukucela imali noma ukukhokhela amasevisi engeziwe ombungazi wakho noma isivakashi, njengokucela imali ebuyiselwayo engekho kunqubomgomo yokukhansela, sebenzisaIsikhungo Sesixazululo .